s.th I don't like..
I think age and happiness are inversely proportional. As you get older, happiness fades away. I need to find the true happiness which doesn't change. The question is 'HOW'?
Posted by Thiri at 9:30 PM No comments:
စာရေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးဖို့ ခံစားချက်မရှိဘူး။ ဘာရေးချင်မှန်းလည်း မသိဘူး။ I need an inspiration to write! I feel that I became more cold-blooded than ever. I don't like it. I don't even care about those people I used to care. I miss the old me. .... no more to write...about..
Posted by Thiri at 9:30 PM 1 comment:
I've always been strong, once in awhile I want/need to be weak, too. But it will make my loved ones worried. So instead, I make myself stronger!
Posted by Thiri at 8:31 PM No comments:
My Life after Poly
ကျောင်းပြီးသွားကတည်းက blog မရေးဖြစ်ပါ။ Whatadamn life! ကျောင်းပြီးကတည်းက ဘဝကို ပြန်သုံးသပ် ရရင်ဖြင့်
MARCH - အိမ်ပြန်သည်။ ရှိသမျှ ပြဿနာများ ရှင်းပြီး ပြန်လာသည်။ IS ဖြေဖို့ စပြင်ဆင်သည်။ (အလုပ်မရှာသေး)
APRIL - IS ဖြေသည်။ လိုချင်သည့် result မရ။ ကျောင်းလျှောက်ဖို့ ပြင်သည်။ မဆင်သင့် မဖြစ်သေးမှန်း သိလိုက်၏။ အလုပ်ရှာဖို့ စဉ်းစား၏။ သို့သော်..
MAY - Graduation လ ၊ အလုပ်တော့ တခုစ နှစ်ခုစ လျှောက်ပါသည်။ တကယ်ရရန် မမျှော်လင့်ပါ။ အိမ်က မာမီတို့ လာရင် အလုပ်တဖက်နဲ့ သူတို့နဲ့ မလည်ရပဲ နေမည်ဟု တွေးကာ.. (ဆင်ခြေ.. ဆင်လက်.. ဆင်ခေါင်း.. ဟဲဟဲ..)
JUNE - Graduation ပြီးတော့ အမေတယောက်တည်း ပြန်မည် ဖြစ်သည်။အကျဲက သီရိနဲ့ ၁လကျော်လောက် နေဦးမည်။ အမေ့တစ်ယောက်တည်း ပြန်လွှတ်ရန် မဖြစ်သဖြင့် သီရိပါ လိုက်ပြန်ပါသည်။ (၁ပတ်) အကျဲ မွေးနေ့ အမီ ပြန်လာသည်။ သူ့မွေးနေ့မှာ ကဲကြသည်။ အလုပ်မရသည်လည်း စိတ်မပူ.. အဖော်များလည်း ရှိသဖြင့်.. နေခွင့်ကလည်း ကျန်သေးသဖြင့်..
JULY - လလယ်တွင် အကျဲပြန်သွားသည်။ မွန်သီပါ ပါသွားသည်.. သူ့ visa ကိစ္စအတွက်။ တယောက်တည်း ကျန်ခဲ့သည်။ ကျောင်းက ကပွဲအတွက် အပြတ်ပြင်ဆင်သည်။ ကျန်တဲ့အချိန် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ကြည့်ကာ အချိန်ဖြုန်းသည်။ ဘဝတွင် အလေအလိုက်ဆုံးသော အချိန်များ ဖြစ်၏။
AUGUST - ကပွဲ အောင်မြင်စွာဖြင့် မညီ့တညီကကာ ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ အလုပ်တကယ် seriously, စရှာပါသည်။ ထင်ထားသလောက် မလွယ်မှန်း သိလုိုက်ပါသည်။ လျှောက်သည့် အလုပ်များကလည်း ကိုယ့် course နဲ့ ဘယ်လိုမှ မပက်သက်။ office job များ ဖြစ်သည်။ တရုတ်စကား မပြောတတ်၍ ဘယ်အလုပ်ကမှ မခေါ်ချင်။
SEPTEMBER - financial consultant အလုပ် try လိုက်သေးသည် (ရူးကြောင်ကြောင်ဖြင့်)၊ ပိုက်ဆံ ၁၀၀ ပေးကာ စာမေးပွဲက ဖြေလိုက်သေးသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဘဝမှာ စာမေးပွဲကျမည် ထင်လိုက်သည်။ မဟုတ်ပါ.. ထုံးစံအတုိုင်း အောင်သွားသည်။ ဘယ်လို အောင်သွားသည်တော့ မသိ။ နောက်တော့ မလုပ်ချင်မှန်း သိ၍ မလုပ်တော့ပါ ပြောကာ တခြား အလုပ်ရှာသည်။ there.. chartered semi-conductor company link ကို မထူးထူးက ပေးသဖြင့် တွေ့ရာ post လေး ငါးခု လျှောက်လိုက်သည်။ နည်းနည်းမှ interview ရဖို့ မျှော်လင့်မထား..
OCTOBER - လုံးဝမမျှော်လင့် ထားပါသဖြင့် chartered က interview ခေါ်ပါသည်။ သွားပါသည်.. ဖြေချင်ရာများ ဖြေပြီး သင်္ချာ ပျော်ပျော်ကြီး
တွက်ကာ ပြန်လာပါသည်။ တခြား အလုပ်များ ဆက်ရှာသည်။ ၂၁ နှစ် မပြည့်ခင် ၂ပတ်အလို မနက် ၁၀လောက် အိပ်နေတုန်း chartered က ဖုန်းခေါ်ပြီး အလုပ်ခန့်ကြောင်း ပြောပါသည်။ အလွန်ပျော်ပါသည်။ သတင်းစာ ဆက်လှန်စရာ မလိုတော့သဖြင့်.. =) ၂၁နှစ် မပြည့်ခင် ၂ရက်အလို.. ဘဝတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အလုပ်စဆင်းပါသည်။ ပျော်စရာကောင်း၏.. ဘာမှ လုပ်စရာ မလုိုသေး Orientation ၂ရက် ဖြစ်သည်။ စားလုိုက် သောက်လုိုက် ငိုက်လိုက်နဲ့ ပြန်ပြန်လာသည်။ မွေးနေ့တွင် သီရိလုပ်ရမည့် department သို့ စရောက်ပါသည်။ Boss က သီရိ supervisor ဖြစ်မည့် lady ကို ခေါ်ကာ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထို့နောက် သူ့နောက် လိုက်သည်။ သူ့ cubicle ထဲ ရောက်တော့ အဲ့ lady က သူ ဘယ်သူတွေနှင့် မတည့်ကြောင်း ၊ Boss နှင့်လည်း ရန်ဖြစ်ကြောင်း စပြောပါသည်။ အတော် စိတ်ညစ်သွား၏။ Well.. i m not interested whether u fight with boss or whoever.. i just want to know about my job scope.. But I didn't get any clue about my job scope on that day.. actually, i didn't after one month either.
NOVEMBER TO MAY 2010... TO BE CONTINUED..
p.s. မွေးနေ့တွင် သူငယ်ချင်းများက surprise party လုပ်ပေးသဖြင့် အလွန် ပျော်ပါသည်။
THANK YOU GUYS, SO MUCH..
Posted by Thiri at 5:07 AM 1 comment:
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်တတ်တော့တဲ့ငါ..
ဘယ်သူ့အပေါ်မှလည်း မျှော်လင့်ချက် မထားတတ်တော့တဲ့ငါ..
Posted by Thiri at 4:54 AM No comments:
ဟန်ဆောင်မှုတွေ မကြိုက်တဲ့ငါ ၊ ဟန်ဆောင်မှုတွေကြားမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့သလား..
နာကျင်မှုတွေကို မလိုချင်တဲ့ငါ ၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ပဲ ရှင်သန်ခဲ့တာလား..
ဖြူစင်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ငါ ၊ လ်ိမ်ညာမှုတွေကိုပဲ ရခဲ့တာလား..
မျက်ရည်ကျဖို့ ဝန်လေးတဲ့ငါ ၊ ငါ့မျက်ရည်စတွေကို လွှင့်ပစ်ရဦးမလား..
ခင်မင်မှုကို တန်ဖိုးထားတဲ့ငါ ၊ ငါ့ခင်မင်မှုတွေ အသုံးချခံ လိုက်ရသလား..
နောက်ထပ် ထိုးနှက်ချက်တွေ မလိုတော့တဲ့ ငါ့ဘဝမှာ.. ထိုးနှက်ချက်တွေပဲ ထပ်ရဦးမှာလား..
Posted by Thiri at 3:24 PM3comments:
ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဆိုတော့ သီရိရဲ့ သီတင်းကျွတ်အကြောင်း ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ရေးလိုက်ဦးမယ်နော်။ သီတင်းကျွတ်ကို ကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ အများကြီးပါ။ အဓိကကတော့ သီရိမွေးနေ့ရှိလို့ပါ… အသက်တစ်နှစ် ပိုကြီးသွားတာ ကြိုက်လို့ လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ မွေးနေ့လက်ဆောင် ရပြီး မွေးနေ့ကိတ်မုန့်စားရလို့ပါ.. ဟီး။ ဒုတိယ အချက်ကတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် ရလို့ပါ။ ပြီးတော့ သီတင်းကျွတ်မှာ ဗျောက်ဖောက်ရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်… အိမ်ကို မီးထွန်းပြီး အလှဆင်ရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ကလေးတုန်းကတော့ မီးပုံးကား ဆွဲရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
အဲ.. မီးပုံးကား ဆွဲတဲ့ကိစ္စကို ပြောရပါဦးမယ်… သီရိက အရမ်းဆိုးတယ်.. ငယ်ငယ်က… သီတင်းကျွတ်မှာ မီးထွန်းရတာ ၃ရက်မဟုတ်လား… အဲ့လိုဆို သီရိက တစ်ရက်ကို မီးပုံးကား တစ်မျိုး ဆွဲချင်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ မီးပုံးကား သေးသေးလေးက အစ… ဟိုးအကြီးကြီးထိ ဆွဲချင်တာပါ။ အဲ့လိုဆိုတော့ အကြံအဖန် လုပ်ရတာပေါ့။ မေမေက မီးကား၂ကား ပြိုင်တူ ဘယ်တော့ ဝယ်မပေးပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုတော့ကာ တစ်နေ့တစ်ဆိုင် မရောက် ရောက်အောင် အကြံအဖန် လုပ်ပြီး သွားတာပေါ့… ဟီး။ မေမေကလည်း တစ်ရက်တစ်ခု ဆိုရင်တော့ ဝယ်ပေးတယ်… ထူးဆန်းတယ်နော်။
သီရိဆွဲဖူးတဲ့ မီးပုံးကား ပုံစံတွေကတော့ စုံနေတာပဲ.. ယုန်သေးသေးလေးက အစ သင်္ဘော အကြီးကြီးအထိ...မေမေက တိုးနယားရုပ်တွေကို သေချာမှာပေးဖူးတယ်။ အမွေးတွေ တွဲလောင်း တွဲလောင်းနဲ့… ညီမတစ်တွေ တစ်ယောက်၁ရုပ် ရောင်စုံတိုးနယားတွေကို ဆွဲခဲ့ဖူးတာ သတိရမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ တိုးနယားတွေက ၃ရက်ခံတာ အတော်ရှားတယ်။ သူက အမွေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ လောင်တာပေါ့။ မီးပုံးကားဆွဲရတာ ရန်ခုန်ဖို့ ကောင်းတာ အဲ့ဒါပါပဲ။ အရုပ်တွေ မီးလောင်ပြီဆို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဝိုင်းတက်နင်းရတာလည်း feeling တစ်မျိုးပါပဲ… ဟီး။ ကလေးလေးတွေက ရီဖို့ ကောင်းသလို ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်… အဲ့အရုပ်လေးတွေကို မီးထွန်းပြီး အိမ်ရှေ့မှာ လျှောက်ပတ်နေရတာကို ပျော်နေကြတာ။
သီရိရဲ့ သီတင်းကျွတ် အဖြစ်အပျက်တွေ ပြောရရင်တော့ မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာ လေးတွေပဲ ရွေးပြောပြမယ်။ တစ်ခါတုန်းက သီရိရဲ့ စကပ်အဝဲကြီးကို မီးမစွဲမလိုလို ဖြစ်လို့ ရန်ခုန်လိုက် ရတာလည်း အမော။ နောက်ပြီး အိမ်က အဒေါ်တစ်ယောက်… ဝရန်တာမှာ ချိတ်ထားတဲ့ မီးပုံးကို မီးစွဲပြီးလောင်နေတာကို မသိပဲ အဲဒီ့အောက် တည့်တည့်မှာ သွားရပ်နေရော။ အဖြစ်ကဆိုးချင်တော့ အားလုံးက ဝိုင်းအော်နေတဲ့ကြားက အဲ့အောက်မှာ ဆက်ရပ်နေပါတယ်… result ကတော့ သူ့ဆံပင်ကို မီးစွဲသွားတာပေါ့။ အပေါ် မီးပုံးက ကျတဲ့ မီးစလေ… ဟီး ဝုန်းကနဲ ဦလေးတစ်ယောက်က သူ့ကို ရေနဲ့ ပက်တော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ကြည့်နေပါသေးတယ်။ သူ့ဆံပင် မီးစွဲနေတာကို သူကိုယ်တိုင်က မသိသေးဘူးလေ။
နောက်တစ်နှစ်ကတော့ မီးသရဲဆော့တာ နာမည်ကြီးတဲ့နှစ်ပါ။ အဲ့တော့ မီးသရဲလုပ် ကြတာပေါ့။ ဟီး.. အလုပ်လွန်တာ.. အမဝမ်းကွဲ ထိပ်ပြောင်သွားပါရော… ဆံပင်ဆို သေအောင်နှမြောတတ်တဲ့ သူ့ကျမှပဲ ဆံပင်ပြောင်သွားရတယ်လို့… ဖြစ်လည်း ဖြစ်တတ်ပါဘိ။
အပျော်ဆုံး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကတော့ သီရိမွေးနေ့နဲ့ လပြည့်နေ့ တစ်ထပ်တည်း ကျခဲ့ဖူးတဲ့နေ့ပါ။ အခန်းတစ်ခန်းလုံးကို မီးမှောင်ချပြီး… မီးပန်းလေးတွေက ရတဲ့ မီးရောင်နဲ့ပဲ မွေးနေ့ကိတ် ခွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့လေးပါ။
သီတင်းကျွတ်မှာ မုန်းတာကတော့ ကားထဲကို ဗျောက်ပစ်ထည့်တာတို့… လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူဆီကို ဗျောက်လှမ်းပစ်တာတို့… သူများ ဆိုင်ကယ်ခြင်းတဲ့ ဗျောက်ထည့်တာတွေကို မုန်းပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မုန်းတာပေါ့နော်။ သဘာဝကိုလည်း မုန်းပါသေးတယ်။ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းတဲ့ညမှာ မိုးရွာလာလို့ကတော့ အဲ့မိုးကို သေအောင် ကြိမ်ဆဲပြီမှတ်။
သီတင်းကျွတ်မှာဆို လူကြီးမိဘ ဆရာသမားတွေကို လိုက်ကန်တော့ရတာကိုလည်း နှစ်သက်မိပါတယ်။ သွားမကန်တော့ခင်ကတော့ ကလေးပီပီ သွားရမှာ ပျင်းတာပေါ့။ ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ တော်တော်နဲ့ မပြန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ချကျွေးသမျှ မုန့်တွေ ထိုင်စားနေလို့လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ (တကယ်တော့ ထိုင်စားတာပါပဲ… ကြိုက်တဲ့ဟာဆို ထပ်တောင် တောင်းသေးတယ်… ဟီး)။ မတွေ့တာကြာတဲ့ လူကြီးသူမဆရာသမားတွေနဲ့ တွေ့တော့ စကားကောင်းနေတာပေါ့… တော်တော်နဲ့ ပြောလို့ မပြီးပါဘူး။ ဟီး… တကယ်ပြန်စေချင်ပြီ ဆိုရင်တော့ မုန့်ဖိုးပေးပေတော့… မုန့်ဖိုး မရမချင်းလည်း ထပြန်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။
ကဲ… ဒါလောက်ပဲ ပြောတော့မယ်နော်… ရေးတာလည်း တော်တော်များပြီ။ ဖတ်ရတဲ့သူလည်း ပျင်းလောက်ပြီ။ ရေးတဲ့သူလည်း ပျင်းလာပြီဆိုတော့ကာ… တာ့တာ။
Posted by Thiri at 4:42 PM 1 comment:
သီရိက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီblogလေး ကတော့ သီရိ ရေးချင်တာလေးတွေကို စိတ်ကူးရသလို ရေးထားတာပါ။ I wanna say "Welcome" to whoever visits my blog. =)
I think age and happiness are inversely proportion...
တခြား blog တွေ သွားလည်ချင်ရင်..